Big E dia nanapaka ny fahanginana taorian'ny nahazoany ny amboara faha-2 Intercontinental - Wwe
Big E dia nanapaka ny fahanginana taorian'ny nahazoany ny amboara faha-2 Intercontinental
Big E dia nandresy an'i Sami Zayn mba ho lasa Tompondakan'ny kaontinanta vaovao ao amin'ny WWE SmackDown.
Big E sy Zayn dia nifamaly nandritra ny fotoana kelikely. Niatrika an'i Zayn tamin'ny famoahana manokana ny Krismasy WWE SmackDown ilay mpikamban'ny Andro Vaovao teo aloha tamin'ny lalao Lumberjack ho an'ny amboara Intercontinental. Ny Big Ending dia namarana ny fanjakan'i Sami Zayn, ary ny WWE SmackDown farany tamin'ny 2020 dia nifarana tamin'ny fankalazana lehibe an'i Big E.
Ankehitriny, Big E dia nanapaka ny fahanginany taorian'ny fandreseny lehibe an'i Zayn, tao anaty tafatafa iray ambadiky ny sehatra. Big E no nahazatra azy matetika nandritra ny tafatafa, izay azo jerena ao amin'ilay horonan-tsary nakarina etsy ambany.
Nandeha niasa tamin'ny zazalahy Sami Zayn aho, ary nanao izay tsy maintsy nataoko mba hahatongavanao ho Tompondakan'ny Intercontinental Champion anao fanindroany. Aza adino ny 2013, efa nanao ny ataoko koa aho taloha. Nandeha niasa tany ambadik'io zazalahy io aho! Nilaza aho fa nosokafako ny takolany ary hoy aho hoe manamboatra eto aho.
Ity fandresena Big E ity dia efa ela
Big E dia tsy nitsahatra naka voly hatrizay. Nisaraka tamin'ny The New Day izy nandritra ny Drafitra WWE 2020, ary nanantena ireo mpankafy azy fa hitarika fanosehana lehibe ho azy io ato ho ato. Toa ity fandresena amboara Intercontinental ity no mety ho voalohany amin'ny fandresena lehibe hatolotr'i Big E rehefa mandroso isika.
maninona no mitranga amiko ny zava-dratsy rehetra
Ny andro vaovao
Big E dia naneho ny fahaiza-manao taloha, ary ny niarahany tamin'ny The New Day dia nampivelatra azy ho iray amin'ireo olona mahatsikaiky indrindra amin'ny WWE maoderina. Ity misy fanantenana fa ny WWE dia mitantana tsara ny lohatenin'i Big E ary nivadika ho kintan'ny hetsika lehibe izy amin'ny faran'ny io.
inona no ataon'ny olona rehefa mitaintaina izy
inona no ilain'izao tontolo izao dieny izao
ny fomba hananana fetra amin'ny fifandraisana
tsy misy mihaino ahy mihitsy